Wayin Ayaa Bilaabay Hillaaca Tooska Ah Sheekooyin Bulsheed Moobil | Martech Zone
Xayeysiinta dhijitaalka ah ayaa gaadhay heer dhibic. 50% dadka qaangaarka ah waxay si firfircoon uga fogaadaan xayeysiinta mobilada iyo desktop-ka halka 47% kalena ay si firfircoon uga fogaadaan xayeysiiska app-ka ku jira. Kuwani waa lambarrada wadaya qalabka Wayin, Sheekooyinka Bulshada, waa aalad muhiim u ah suuqgeynta sumadaha iyo xayeysiiyaasha.
Maanta, haddii isticmaaleyaasha barta 'Instagram' ay guji ama ku dul mariyaan a Sheeko kafaala qaaday, badanaa waxay qaadataa buuxa shan ilbiriqsi loogu talagalay websaydhka calaamaddu inuu ku shubto gudaha barnaamijka. Isticmaalayaasha moobiilku waxay helayaan dulqaad la'aan, jahwareersan waxayna dib ugu laabtaan abka, astaamaha waxay la ildaran yihiin guji hooseeya iyo heerarka kaqeybgalka.
Sheekooyinka Bulshadu waa aalad u oggolaanaysa noocyada inay ku shuban karaan waxyaabaha la calaamadeeyay xawaaraha rikoodhka iyo asal ahaan gudaha barnaamijka, halkii ay si tartiib tartiib ah ugu qaadan lahaayeen isticmaalaha websaydhka sumadda. Summadaha, tani waxay soo saartaa kaqeybgal sarre iyo is-beddelka ku saabsan wicitaanada-ficilka ee sheekooyinka la kafaala qaaday
Sheekooyinka Bulshada ayaa ugu dambeyntii u oggolaanaya noocyada inay ku fiicnaadaan waxyaabaha la kafaala qaaday Sheekooyinka Instagram iyo Snapchat. Qalabku wuxuu ku dheereynayaa waaya-aragnimada astaanta xawaaraha rikoodhka, taas oo ka dhigaysa waxyaabaha la kafaala qaaday khibrad dhab ah oo aad u liidata macaamiisha. Calaamadaha, tani waxay soo saartaa kaqeybgal sarre iyo is-beddelka ku saabsan wicitaanada-ficilka ee sheekooyinka la kafaala qaaday.
Maanta, haddii macaamilku uu ku dhejiyo ama uu ku dhufto sheeko la kafaala qaaday, waxay u jiheysaa shaashad maran halkaasoo ay inta badan ku qaadato shan ilbidhiqsi oo buuxa oo ah websaydhka astaanta ah inuu ku shubto gudaha barnaamijka. Dib-u-dhaca wuxuu hoos u dhigayaa waayo-aragnimada macaamilka ee astaanta waxayna badanaa ka dhigeysaa macaamiisha niyad-jab ku filan inay u gudbaan wax kale. Sheekooyinka Bulshada ayaa tan ku xallinaya adoo siinaya khibrad hillaac-degdeg ah oo isla markiiba ku dhejin kara waxyaabaha ku jira astaan ​​ahaan asal ahaan gudaha barxadda, iyagoo abuuraya khibrad isticmaale aan xaddidneyn. Richard Jones, oo ah madaxa shirkadda Wayin
Intaa waxaa sii dheer, Sheekooyinka Bulshadu waxay leeyihiin awood horumarsan oo lagu daro waxyaabaha halista ah, su'aalaha iyo farsamooyinka degdegga ah ee lagu guuleysto sheekooyinka, taas oo u oggolaanaysa calaamadaha inay soo ururiyaan xogta PII-ga koowaad ee waayo-aragnimada shakhsi ahaaneed, iyo ugu dambeyntii, heerarka gujiska sare.
Demo Wayin Sheekooyinka Bulshada
Tags: xogta xisbiga ugu horeysaInstagramSheekooyinka instagramxayeysiiska moobaylkamobile wareegasheeko baraha bulshadaxayeysiiska la bixiyayjooniska richardsheekooyinka snapchatsheekooyinka bulshadasheekada bulshadaSheeko kafaala qaadaywayin